[Ukara] dr.fone Toolkit - Android Data Recovery The Best N'ihi 2017
The ụwa 1st data mgbake software nke gam akporo smartphones na mbadamba.
N'atu mgbake ọnụego na njem.
Ò Kwekọrọ n'Ozizi na 6000+ gam akporo ngwaọrụ.
Special Nye (na Mobile naanị)
Zụrụ Windows Buy maka Mac
Cheta na: Jiri ihe omume gị Windows / Mac OS kọmputa.
Echefuola Data si gam akporo?
Echefuola data na-agaghị efu. Anyị nwere ike naghachi ehichapụ faịlụ na gam akporo si ọtụtụ nkịtị ndapụta.
SD Kaadị Issue
ROM na-egbu maramara
Echefuola data mgbe factory weghachi
Echefuola data n'ihi OS update
Device rapaara na bụghị-aza
Data na-efu mgbe dịrị ma ọ bụ ROM na-egbu maramara
Device ekpochi ma ọ bụ chefuo paswọọdụ
Onweghi ike mekọrịta ndabere
Lelee & Preview maka Free
Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche banyere ma gị furu efu data na gam akporo nwere ike natara ma ọ bụ, ị nwere ike ibudata free ikpe version ike iṅomi ya mbụ. Mgbe iṅomi, ị ike ihuchalu hụrụ data. Ọ bụ free.
Dị iche iche na faịlụ na-recoverable
Nke a gam akporo data mgbake software na-ahapụ gị naghachi-ehichapụ ma ọ bụ furu efu kọntaktị, ozi ederede, photos, WhatsApp ozi, music, video na ndị ọzọ akwụkwọ.
Ozugbo ị chọta gị furu efu data na gam akporo ngwaọrụ, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na-azọpụta ya na gị na kọmputa na otu click.
Nkwado 6000+ gam akporo ụdị
Ị nwere ike iji nke a gam akporo data mgbake ngwa naghachi data on n'elu 6000 gam akporo igwe na mbadamba si Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, wdg The ndepụta nke na-akwado ngwaọrụ ka na-eto eto n'ike n'ike.
Gbanyere mkpọrọgwụ & Unrooted gam akporo Ngwaọrụ
Nke a gam akporo data mgbake ngwá ọrụ na-arụ ọrụ ma gbanyere mkpọrọgwụ na unrooted gam akporo ngwaọrụ, ma ọ gaghị agbanwe ihe ọ bụla na ya. The gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ ga-ka gbanyere mkpọrọgwụ, na unrooted onye ga-anọgide.
Naghachi Data si SD Kaadị
Dị ka SD kaadị na gam akporo, ị nwere ike na-iṅomi ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ma ọ bụ jikọọ ya na a kaadị agụ. Ma na-arụ ọrụ.
100% Nchekwa Gaurantee
Nke a gam akporo data mgbake software naanị na-agụ data na gị gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ ga-adịghị gbanwee ihe ọ bụla, na-na ma ọ bụ ihihi ihe ọ bụla na ngwaọrụ gị na ndị ọzọ.
Gam akporo data mgbake na-ada a mara mma ọkachamara ihe. N'ezie, ma ndị na-enweghị ihe ọ bụla ọkachamara kọmputa nkà nwere ike ijikwa ya mfe. Iṅomi, ifiọk na-agbake. All mkpa ka ị na-eme bụ ndị a atọ nwa nzọụkwụ.
All ọrụ a gam akporo data mgbake software pụrụ inweta free upgrade na-eme n'ọdịnihu. Ahịa ọrụ a na-gụnyere.
Lelee Mezuru Emezu NLEREANYA Ndepụta nke na-akwado ngwaọrụ >>
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac OS X 10.12 (MacOS Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10,8, 10.7, ma ọ bụ 10.6
Gam akporo 6.0 na mbụ
Iṅomi na-agbake na-ehichapụ data site na gam akporo ngwaọrụ
Ike iṅomi gị na kaadị ebe nchekwa na gam akporo ngwaọrụ na-agbake data
The kasị elu mgbake ọnụego na njem.
Gbalịa Ọ Free N'ihi na 30 Days!
Preview E Nwere
Naghachi niile data, ma ọ bụ faịlụ ndị ahọrọ
Ẹdude data gaghị overwritten
Ị nwere ike ịnweta akaụntụ gị na faịlụ
3 dị mfe nzọụkwụ: jikọọ, ike iṅomi ma gbakee na android
30 ụbọchị free ikpe
" Dr.fone Toolkit bụ a na desktọọpụ ngwa maka Windows PC. Dị nnọọ wụnye ya, mgbe ahụ, ẹkedori usoro ihe omume na jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa gị. Site n'ebe ahụ, i nwere ike ịchọ ehichapụ photos, ederede ozi, videos, kọntaktị na ndị ọzọ na ala. mụtakwuo >>
- Site Softonic, a na-eduga software download na saịtị na 100 nde mmadụ kwa ụbọchị
" Dr.fone Toolkit maka gam akporo nwere ihe dị mfe iji interface na ike igodo site na ọrụ niile ọkwa nke nka. Ọ bụ fechaa na adịghị eji nnukwu ego nke usoro ego. N'ozuzu, a kama uru kit nwere ike inwe gị nke a ole na ole nnyapade ọnọdụ mgbe ọ na-abịa data mgbake gị gam akporo ngwaọrụ. Mụtakwuo >>
Dr. Fone nwere incredibly mfe UI na ebube kọwara nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka, ka ihe ọ bụla nwere ike omume na-aga na-ezighị ezi. Nke a bụ ihe kasị mma Data Recovery Software m na-abịa gafee.
Site Ammar Syed
Ọ na-arụ ọrụ !!!!!!!!!!!!!!! =)
Ekele Chineke maka ihe omume a na-arụ ọrụ na ọrụ ebube !!!!!!!!! Ọ hụrụ niile txt m nnọọ na-achọ im otú obi ụtọ Eek =) M kpamkpam nwere ike ikwu na nke a =) Chineke Gọzie
na-arụ ọrụ nwee
Ndi akporo upgrade na m S6 ka 5.1.1 na m kọntaktị okụrede (dị ka uche gị). Dr Fone natara zuru ndepụta (ọ bụ ezie na m nwere ike iwepụ ekwentị m mbụ). Ọ na-eji ọzọ ụzọ wepụ data. A obere price iji kwụọ ụgwọ maka nnukwu ass izoputa.
Olee otú Dịghachi ehichapụ Text Ozi si gam akporo Ngwaọrụ